Ikhabethe elihle lasePinawa
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Brianne
Ikhabethe elithokomele lezinkathi ezine, elitholakala ekhoneni elikude le-Pinawa, lisekelwa umhlaba ogciniwe womphakathi kanye nechibi elingale. Jabulela ukushushuluza ezindleleni eziseduze nokudoba eqhweni ebusika, noma ukubhukuda ezansi nomgwaqo ehlobo! Imizuzu emibili ukusuka e-Pinawa Golf Course, futhi udlulele kancane nge-Pinawa Channel tubing, konke kulungile lapha! IPinawa inamanzi amahle acwebile, futhi isendaweni enhle yokuhlola izindlela zokuhamba izintaba zaseNyakatho Whiteshell.
Ikotishi lethu lifakwe ubusika ngokuphelele, linegaraji elinamathiselwe, amagumbi amabili okulala phezulu, ikhishi eligcwele, negumbi lokugezela kanye newasha nokomisa egumbini elingaphansi. Kukhona umpheme omuhle ngemuva, futhi izinyamazane zendawo ziqinisekile ukuthi zizofika ukuze zivakashe nsuku zonke.
Jabulela ukunethezeka kwePinawa - indawo yokuzizwa ekude, eqhele ngehora nje elingaphezu kwehora usuka eWinnipeg, ngokunethezeka kwesitolo segrosa esihle kakhulu, igalaji likaphethiloli, nezindawo zokudlela edolobheni. Uma udinga izinto zezemidlalo, ukuqashwa kwazo zonke izinhlobo kuyatholakala e-Wilderness Edge eseduze. Hlola umzila we-Ironwood ngasemanzini e-Pinawa - wonke umhlaba ogciniwe womphakathi! - noma uvakashele iPinawa Dam Provincial Park, Whiteshell Provincial Park, noma iPinawa Suspension Bridge, yonke imizuzu ukusuka lapho.
Itholakala ngefoni, umbhalo, noma i-imeyili.